Ndị Efesọs 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Sign Language Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mexican Sign Language Moore Mozambican Sign Language Myanmar Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Joshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Solomọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsi 1 Ndị Tesalonaịka 2 Ndị Tesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe 1 2 3 4 5 6
Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Efesọs 2:1-22
Chineke mere ka anyị dịrị ndụ, anyị na Kraịst adịrịkwa n’otu (1-10)
Kraịst kwaturu mgbidi kewara ìgwè abụọ (11-22)
2 N’ihi mmehie unu, unu dịbu ka ndị nwụrụ anwụ. Ma, Chineke mere ka unu dị ndụ.+ 2 E nwere mgbe unu na-eme otú ụwa a* si eme,+ na-emekwa ihe onye ikuku nke ụwa a dị n’aka chọrọ.+ Ikuku a bụ ụdị echiche*+ nke na-akpa ike ugbu a n’ime ndị nnupụisi. 3 N’eziokwu, n’oge gara aga, anyị niile mere omume otú ha si eme, n’ihi na anyị na-eme ihe ọ bụla anụ ahụ́ anyị chọrọ ka anyị mee.+ Anyị na-eme ihe ọ bụla na-atọ anụ ahụ́ anyị ụtọ, na-emekwa ihe ọ bụla batara anyị n’echiche.+ Kemgbe a mụrụ anyị, anyị bụ ndị Chineke kwesịrị iwesa iwe+ otú ndị ọzọ bụ. 4 Ma, n’ihi ebere Chineke na-enweghị atụ+ na otú o si hụ anyị n’anya hie nne,+ 5 o mere ka anyị dịrị ndụ, anyị na Kraịst adịrịkwa n’otu, n’agbanyeghị na anyị dị ka ndị nwụrụ anwụ n’ihi mmehie anyị.+ N’eziokwu, ọ zọpụtala unu n’ihi amara ya. 6 Chineke emeekwala ka anyị dịrị ndụ, nyekwa anyị ebe anyị ga-anọ ọdụ n’eluigwe n’ihi na anyị na Kraịst Jizọs dị n’otu.+ 7 Ihe mere Chineke ji mee ihe a bụ ka o gosi na amara ya enweghị atụ mgbe ọ ga-emere anyị ihe ọma n’oge na-abịa abịa, n’ihi na anyị na Kraịst Jizọs dị n’otu. 8 N’ihi amara Chineke, a zọpụtala unu, ndị nwere okwukwe.+ A zọpụtaghị unu n’ihi mbọ unu gbara, kama ọ bụ onyinye Chineke. 9 A zọpụtaghị unu n’ihi ọrụ ndị unu rụrụ,+ ka onye ọ bụla ghara inwe ihe ọ ga-eji na-anya isi. 10 Anyị bụ ọrụ aka Chineke. Ebe ọ bụ na anyị bụ ndị na-eso ụzọ Kraịst Jizọs,+ e kere anyị+ ka anyị na-arụ ọrụ ọma, nke Chineke dị mbụ kpebie ka anyị na-arụ. 11 N’ihi ya, chetanụ na unu abụghị ndị Juu. Ndị ụmụ mmadụ biri úgwù na-akpọ unu ndị a na-ebighị úgwù. 12 Unu amaghị Kraịst n’oge ahụ. Unu na ndị Izrel anaghị emekọ ihe ọ bụla, unu esoghịkwa n’ọgbụgba ndụ Chineke ji kwe nkwa.+ Unu bi n’ụwa, ma unu enweghị olileanya, unu amaghịkwa Chineke.+ 13 Ma ugbu a, ebe unu bụ ndị na-eso ụzọ Kraịst Jizọs, unu ndị na-amabughị Chineke, abịala mara ya n’ihi ọbara Kraịst. 14 N’ihi na Kraịst emeela ka anyị dịrị n’udo,+ meekwa ka ìgwè abụọ ahụ bụrụ otu,+ kwatuokwa mgbidi kewara ha.+ 15 O mechara mee ka ha bụrụ otu ìgwe,+ ha adịrịkwa n’udo. N’eziokwu, ìgwè abụọ ahụ bụcha ndị na-eso ụzọ ya. N’ihi ahụ́ ya o ji chụọ àjà, o mere ka a kwụsị ịna-edebe Iwu Mosis. Ọ bụ Iwu a mere ka ìgwè abụọ ahụ dịrị n’iro. 16 N’ihi ọnwụ ọ nwụrụ n’osisi ịta ahụhụ,*+ o mekwara ka Chineke na ìgwè abụọ ahụ dịrị n’ezigbo mma, ka ha nwee ike ịbụ otu ahụ́ maka na o jirila onwe ya mee ka ha ghara ịbụkwa ndị iro.+ 17 Ọ bịakwara zisaara unu ndị na-amaghị Chineke ozi ọma nke udo, zisaakwara ndị ma ya. 18 N’ihi na àjà o ji ndụ ya chụọ emeela ka anyị niile nọ n’ìgwè abụọ a nwee ike ịna-abịa Nna anyị nke eluigwe nso maka na ọ na-enye anyị niile mmụọ nsọ. 19 N’ihi ya, unu abụghịzi ndị mbịarambịa na ndị mba ọzọ,+ kama unu na ndị nsọ bụ ụmụ amaala,+ unu sokwa n’ezinụlọ Chineke.+ 20 A rụkwasịkwara unu n’elu ntọala, nke bụ́ ndịozi na ndị amụma,+ ebe Kraịst Jizọs bụ nkume ji ụlọ e ji tọọ ntọala.+ 21 E jikọkwara akụkụ ụlọ ahụ niile ọnụ. Ebe ọ bụ na ụlọ ahụ na Kraịst dị n’otu,+ ọ na-aghọrọ Jehova* ụlọ nsọ.+ 22 Ebe ọ bụ na unu na Kraịst dịkwa n’otu, Chineke emeela ka unu na ndị ọzọ bụrụ ụlọ o bi, n’ihi na mmụọ ya dị ebe ahụ.+
^ Ma ọ bụ “ndị oge a.” Gụọ Nkọwa Okwu, “Oge a.”
^ Na Grik, “mmụọ.”